Maxkamada ICC oo dooneysa in la xaliyo talaabada ay wadama qaar isaga baxayaan hannankii lagu soo dhisay – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamada ICC oo dooneysa in la xaliyo talaabada ay wadama qaar isaga baxayaan hannankii lagu soo dhisay
Maxkamada caalamiga ee dambiyada dagaalada ee loo soo gaabiyo ICC ayaa wado qorsho ay ku dooneyso in lagula tacaalo talaabada ay dhawaan wadamo badan ku goodiyeen in ay isaga baxayaan hannankii lagu soo dhisay ee Rome Statute.
Qorshahan ayaa salka ku hayo kulan maalintii jimcada ka dhacay magaalada Hague oo loogaga hadlayay wada shaqeynta ka dhaxeysa maxkamada iyo wadamada kala duwan ee xubnaha ka ah.
Kulankan ayaa waxaa ka soo qeyb galay 30 qof oo ka soo jeedo in ka badan 20 wadan oo ka mid ah xubnaha maxkamada ICC, qaar ka mid ah howlwadeenada maxkmada iyo sido kale qaar ka mid ah sarakiisha gudiyada caalamiga ah.
Dhanka kale, qorshaha lagu xalinayo talaabada wadamada qaar ay sheegeen in ay qaadayaan ayaa ah mid lagu tixgelin doono aragtida khuburada ariimaha xiriirka caalamiga ah.
Tani iyo markii maxkamada ay oo afjartay dacwadihii ay wajahayeen madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto, ayaa waxaa la saaray cadaadis xooggan.
Bishii Oktobar ee sanadkan ayey ahayd markii wadamada Burundi, koonfur Afrika iyo Gambia ay qaramada midoobay ku wargeliyeen go;aankooda ku aadan in ay isaga baxayaan ka mid ahaanshaha maxkamada ICC.
Bishan ovembar gudaheeda Ruushka ayaa ku dhawaaqay digniin la mid ah midi ay wadamo kale horay u jeediyeen.
Afhayeenka maxkmaada ICC Fadi El Abdallah ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in kulamada ay maxkamada yeelaneyso looga gol leeyahay in lagu wanaajiyo xiriirka ay maxkamada ICC la leedahay wadamada kala duwan.
Wadamada qaarada Afrika ee hoos tago midowga AU-da ayaa si weyn ugu ololeynaya in ay soo afjaraan ka mid ahaanshahooda hannaankii lagu soo dhisay maxkamada caalamniga ee dambiyada dagaalada ee ICC.
← 14 ruux oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay dalka Uganda
Sagaal maalmood oo baroordiiq ah oo looga dhawaqay dalka Cuba ka dib geeridii madaxweynihii hore ee Fidel Castro. →